Umlamdo kaJeff Radebe - Amahlubi Nation
Umhlonishwa uJeff Radebe uneziqu ze-B.Juris aziphothula e-University of Zululand ngo-1976. Uneziqu ze-LLM in International Law aziphothula eLeipzig University ngo-1981 kanti uphinde wafunda naseLenin International School, eMoscow, eRussia, ngo-1985.
UMnuz Radebe ube yisishoshivu sezitshudeni ngesikhathi ejoyina izinhlaka ze-African National Congress (ANC) zabafundi ngezinsuku zomzabalazo owanqotshwa ngabafundi ngo-1976.
Ngawo unyaka ka-1976 waqala ukwenza ama-articles ezilungiselela umsebenzi wobumeli, nokho ngo-1977 wafulathela iTheku, walibangisa eMozambique njengokomyalelo we-ANC.
Ngemuva kwengqophamlando yokhetho lwango-1994, uMnuz Radebe usebenze njengongqongqoshe weMisebenzi yoMphakathi okuyisikhundla ahlala kuso kwaze kwashaya u-June ngo-1999. Waba yilungu leBusiness Trust kusukela ngo-1998 kwaze kwashaya u-2003 waphinde waba nguSihlalo weNelson Mandela 80th birthday Committe ngo-1998.
Ngonyaka ka-2006, uMnuz Radebe waqokwa njengeHonorary Colonel kwi-Airforce yaseNingizimu Afrika. Waphinde waba yilungu lebhodi leLocal Oganising Committee yeNdebe yoMhlaba yango-2010 eyayizobanjelwa eNingizimu Afrika. NgoMeyi 2009, UMnuz Radebe waqokwa njengoNgqongqoshe weZobulungiswa noKuthuthukiswa koMthethosisekelo eNingizimu Afrika eqokwa ngowayengumengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma.
Umlando kaLucas Radebe